किन सँगै बस्दैनन् पारस र हिमानी ? कारण यस्तो ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
पूर्वयुवराज पारस बैंककमा एक्लै लामो समय बसे । त्यहीँ उनी गम्भीर बिरामीसमेत भए । बैंककको रामरउसमा दिन कटाएका पारस बिग्रिएको स्वास्थ्य लिएर १९ चैत ०७१ मा थाई एयरबाट काठमाडौं ओर्लिए । यद्यपि, बैंककमा उनको उपचार गरिएको थियो । विमानस्थलमा पारसको स्वागतका लागि शिवसेनाको नेतृत्वमा ठूलो भीड जम्मा भएको थियो । बुबाआमा, पत्नी र छोराछोरी बसिरहेको निर्मलनिवास नगएर उनी पूर्वआइजिपी हेमबहादुर सिंहका छोरा प्रभञ्जन सिंहको बा.३ च ५४०६ नम्बरको गाडी चढेर चण्डोलस्थित कुन्डलिनी क्लब पुगे ।
स्रोतका अनुसार त्यतिवेला पारसले पत्नी हिमानी आफूलाई लिन विमानस्थल आउने अपेक्षा गरेका थिए । उनको चाहना सीधै निर्मलनिवासमा गएर बस्ने थियो । तर, न हिमानी विमानस्थल गइन् न त पारसलाई निर्मलनिवासमा प्रवेशको अनुमति दिइयो । ‘शुभसाइत’ जुराएर मात्रै दरबारमा भित्राउने भनियो । पारसलाई कुुुन्डलिनी क्लबमै बस्ने चाँजोपाँजो मिलाइयो । त्यहाँ पारस १० दिन बसे । पारसले क्लबमै छोराछोरी र बहिनीहरूसँग भेटघाट गरे । छोराछोरीसँगको फोटो पनि उनले सार्वजनिक गरे ।
‘भविष्य हेर्ने’ केही माताले दरबारलाई दिने सुझाबले पनि पारस र हिमानीलाई सँगै बस्न दिएको छैन । ग्रहदशा बिग्रिएको भन्दै डेढ वर्ष पति–पत्नी छुट्टाछुट्टै बस्नुपर्ने सुझाब माताहरूले दरबारलाई दिएका छन् । पारसका मित्र प्रभञ्जन सिंहले दरबारमा थरीथरीका सुझाब पुगेकाले राजपरिवारका सदस्यबीच बेमेल देखिएको बताए । निर्मलनिवास पुग्ने हरेक माताले डेढ वर्ष पति–पत्नी सँगै बस्न नहुने र ०७४ सालपछि राजतन्त्र फर्किने सुझाब नछुटाई दिने गरेको पारसनिकट स्रोत बताउँछ । सविता सरु र अर्की एक माताले अझ धेरै यस्ता सुझाब दिने गरेका छन् ।
वेलावेलामा पुराना साथीसँग भेटघाट र छलफल पनि गर्छन् । पारसका मित्र प्रभञ्जनका अनुसार बिहान ५ बजे उठिसक्ने पारस योगा र ध्यान गर्छन् । कहिलेकाहीँ बूढानीलकण्ठ स्कुलमा फुटबल र गोकर्ण पुगेर गल्फ पनि खेल्ने गरेको उनले बताए । पारस राजनीतिभन्दा आध्यात्मिक पुस्तकमा बढी रुचि राख्छन् । उनी कहिलेकाहीँ मृगस्थली पुगेर मित्र प्रभञ्जनसँग आध्यात्मिक बहस पनि गर्छन् । अचेल योगी व्यग्र वेदनाथ बनेका प्रभञ्जनसँग पारसको बढी संगत छ ।
आर्ट अफ लिभिङदेखि पूर्वीय दर्शनका सन्त–महन्तहरूसँगको छलफल एवं अन्तक्र्रियामा उनले जोड दिइरहेको प्रभञ्जनले बताए । ‘आध्यात्म र हिन्दूधर्म दर्शनका मौलिक पक्षलाई विश्वभर विस्तार गर्नुपर्छ र त्यसको संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ भन्नेमा बढी नै चासो राख्नुहुन्छ,’ उनले भने । गत ३१ जेठमा मित्र प्रभञ्जनकै योजनामा पूर्वयुवराज पारस खप्तड पनि पुगेका थिए । उनको टोलीमा बहिनी शीताष्मा, प्रभञ्जन, राजेन्द्र सिंह, राजेश सिंहलगायत सहभागी थिए । उनीहरूले खप्तड यात्रामा १० दिन बिताएका थिए । २८ जेठ ०७३ मा पोखरा पुगेका पारस केही दिन पुराना सहपाठीसँगको जमघटमा रमाए ।
बूढानीलकण्ठ स्कुलमा सँगै (सन् १९८३–१९९० एडी) पढेका उनका सहपाठीले जलमहल रिसोर्टमा ग्रान्ड गेट–टुगेदर गरेका थिए । जलमहलका म्यानेजर दिनेश प्रसाईं पारसका सहपाठी पनि हुन् । प्रभञ्जनका अनुसार पारस सहपाठीसँग मिलेर विद्यालयमा पुस्तक, खेलकुदका सामग्री वितरण गर्नेजस्ता सामाजिक कार्यमा संलग्न भइरहेका छन् ।
शाह राजाहरू गोरखनाथको दर्शन गर्न जाँदैनथे । तर, पूर्वयुवराज पारसले उक्त परम्परा तोडेका छन् । बैंककबाट फर्केपछि उनी दुईपटक मृगस्थलीस्थित गोरखनाथ मन्दिर पुगेर दर्शन गरेका छन् । ‘गोरखनाथको दर्शन गर्न हुँदैन’ भनी चलाइएको गलत हल्ला तोड्न पनि पारस दर्शनका लागि आएको प्रभञ्जनले बताए । ‘केही दिन पहिला पनि आउने कुरा रहेछ । म बाहिर भएकाले नआउनुभएको खबर पाएको छु,’ प्रभञ्जनले भने । प्रभञ्जन गोरखनाथ मन्दिरमै बस्ने गर्छन् । पछिल्लोपटक गुरुपूर्णिमाका दिन पारस गोरखनाथको दर्शन गर्न गएको स्रोतले जनाएको छ ।
१७ असार ०६५ मा पूर्वयुवराज पारस सिंगापुर गए । त्यहाँ अपार्टमेन्ट किनेर दुई वर्ष बसे । सिंगापुरमा रहँदा त्यहाँको द न्यु पेपर नामको पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएर पारसले पहिलोपटक दरबार हत्याकाण्डबारे मुख खोले । २००९ मार्च ३० मा छापिएको उक्त अन्तर्वार्तामा जर्मन हतियारको विषयमा विवाद हुँदा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड गराएको दाबी उनले गरेका थिए । २६ मंसिर ०६७ मा चितवनको टाइगर टप्स रिसोर्टमा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ रुबेल चौधरीसँगको झगडापछि पक्राउ परे । आइन्दा त्यस्तो काम नगर्ने सर्तमा रिहा भए ।
७ कात्तिक ०६९ मा थाइल्यान्डको फुकेटबाट ३ दशमलव ४ ग्राम गाँजासहित पारस पक्राउ परे । उक्त मुद्दामा १० हजार थाई भाट तिरेर उनी रिहा भए । २२ मंसिर ०७० मा हृदयाघातपछि अस्पताल भर्ना भएका पारसको १२ दिनपछि होस खुल्यो । साउन ०७१ मा थाइल्यान्डकै होटेल डेभिसबाट ११ दशमलव ७ ग्राम गाँजासहित प्रहरीले पारसलाई फेरि पक्राउ गर्‍यो । थङ्डो प्रहरी स्टेसनमा राखिएका उनी १५ लाख थाई भाट तिरेर धरौटीमा रिहा भए । १९ चैत ०७१ मा पूर्वयुवराज पारस थाई एयरको उडानबाट १२ः३३ बजे काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए ।
०७२ वैशाख पहिलो साता पारस अस्वस्थ भए